Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kuhlola Ukukhuthazwa Kwengqondo Ejulile Ukuze Ukwelapha I-Alzheimer's
Odokotela be-Allegheny Health Network (AHN) bajoyine isilingo somtholampilo esiyingqopha-mlando esihlola ukuphepha nokusebenza kokwelashwa okujulile kokuvuselela ubuchopho ukwelapha isifo i-Alzheimer's. Iholwa uDonald Whiting, MD, usihlalo we-AHN's Neurosciences Institute, Isikhulu Esiphezulu Sezokwelapha se-AHN, kanye nephayona ekusetshenzisweni kwe-DBS ukwelapha izimo ezihlukahlukene eziwohlozayo zezinzwa, i-ADvance II Study iyisivivinyo somtholampilo sesigaba sesi-3 samazwe ngamazwe esinikezwa kuphela. ezikhungweni zezokwelapha ezikhethiwe emhlabeni wonke.
"Sazi ngokusebenzisa kwethu i-DBS cishe iminyaka engamashumi amabili ukwelapha ukuphazamiseka kokunyakaza okufana nokundindizela kukaParkinson kanye nokundindizela okubalulekile ukuthi le nqubo iyindlela yokwelapha ephephile futhi ebekezelelwa kahle," kusho uDkt. Whiting. Bangaphezu kuka-160,000 abantu emhlabeni jikelele abathole ukwelashwa kwe-DBS kulezo zimo.
I-AHN ingesinye seziza ezingama-20 kuphela e-United States ezikhethelwe ukubamba iqhaza Ocwaningweni Lwe-ADvance II nalo oluqhutshwa eCanada naseJalimane.
I-Alzheimer's iwuhlobo oluvame kakhulu lokuwohloka komqondo. Balinganiselwa ezigidini ezingu-6.2, noma oyedwa kwabayisishiyagalolunye baseMelika abaneminyaka engu-65 nangaphezulu uphila ne-Alzheimer's; Amaphesenti angu-72 aneminyaka engu-75 noma ngaphezulu. I-Alzheimer's yisifo esiqhubekayo futhi lapho ifika ekupheleni, ama-neurons ezingxenyeni zobuchopho ezenza umuntu akwazi ukwenza imisebenzi eyisisekelo yomzimba, njengokuhamba nokugwinya. Lesi sifo ekugcineni siyabulala futhi alikho ikhambi elaziwayo.
I-DBS ye-Alzheimer's ihilela ukusetshenziswa komshini otshaliwe ofana nomshini wokushaya inhliziyo nezintambo ezimbili ezinamathiselwe eziletha ama-pulses kagesi athambile ngqo endaweni yobuchopho ebizwa ngokuthi i-fornix (DBS-f), ehlotshaniswa nenkumbulo nokufunda. Ukukhuthazwa kukagesi kukholakala ukuthi kwenza kusebenze ukujikeleza kwenkumbulo ebuchosheni ukuze kucije ukusebenza kwawo.
Ucwaningo olungahleliwe, olungaboni kabili luzothatha iminyaka emine kubahlanganyeli, ngamunye wabo ozohlolwa okujwayelekile kwe-Alzheimer ngaphambi kokuthi kufakwe i-neurostimulator. Imiphumela yalokhu kuhlola ngokomzimba, kwengqondo, nokuqonda izosetshenziswa njengesilinganiso sokuqala njengoba ihlolwa njalo izinga lokuqhubeka kwe-Alzheimer phakathi nesikhathi socwaningo.
Ngemuva kokufakelwa, izingxenye ezimbili kwezintathu zeziguli zizohlelwa ngokungahleliwe ukuze i-neurostimulator yazo isebenze futhi ingxenye eyodwa kwezintathu izobe ishiywe. Iziguli idivayisi yazo evaliwe ekuqaleni kocwaningo zizoyenza isebenze ngemva kwezinyanga eziyi-12.
Kuso sonke isikhathi socwaningo lomtholampilo, ababambiqhaza bocwaningo bazogadwa ithimba lezinhlaka eziningi lodokotela bezinzwa be-AHN, odokotela bengqondo nodokotela abahlinza izinzwa, okuhlanganisa noDkt. Whiting kanye nodokotela ohlinzayo wakwa-AHN kanye nochwepheshe we-DBS u-Nestor Tomycz, MD.
Ukuze zifanelekele lolu cwaningo, iziguli kufanele zibe neminyaka engama-65 noma ngaphezulu, kutholakale ukuthi zine-Alzheimer's emaphakathi, zibe nempilo enhle, futhi zibe nomnakekeli oqokiwe noma ilungu lomndeni elizobaphelezela lapho bevakashela udokotela.
"Imiphumela yezigaba zangaphambili zalolu cwaningo lomtholampilo iyathembisa futhi ikhombisa ukuthi ukwelashwa kungase kuzuze iziguli ezine-Alzheimer's encane ngokuzinzisa kanye nokuthuthukisa ukusebenza kwazo kwengqondo," kusho uDkt. Whiting. “Ukusho ukuthi umphumela oyimpumelelo walolu cwaningo ungashintsha impilo yezigidi zabantu baseMelika abathintwe yilesi sifo esiwohlozayo, esibulalayo asiyona into encane. Sijabule kakhulu ngokuba phakathi kwamaqembu ahlinzayo ahlonishwayo emhlabeni wonke anikeza iziguli ezine-Alzheimer's ukufinyelela kulokhu okuqanjwa kabusha. "
Ngaphansi kobuholi bukaDkt. Whiting, Isibhedlela i-Allegheny General Hospital se-AHN sekuyisikhathi eside sihamba phambili emizamweni yokuphayona yokuqhubekisela phambili ukusetshenziswa kokuvuselela ubuchopho obujulile. Isibhedlela kwaba ngesokuqala entshonalanga ye-Pennsylvania ukusebenzisa ubuchwepheshe ukwelapha ukuzamazama okubalulekile kanye Nesifo sika-Parkinson, futhi muva nje, uDkt. Whiting nethimba lakhe baqale isigaba sesibili sokuhlolwa komtholampilo ukuhlola ukusebenza kahle kwe-DBS ukusiza ukuphatha ukukhuluphala ngokweqile.
Canada Isibhedlela Pennsylvania I-united states
Umbiko Omusha Ngezimpawu Zasebusuku Nokusebenza Kwasemini Kwabantu Abadala Abanokuqwasha
Umongameli waseChina u-XI Jinping wethula i-Propaganda entsha ...
Isikhalazo se-SKAL International emiphumeleni yabasha...
Umongameli we-SKAL World wethula i-Tourism entsha...
Imakethe yeSilage Inoculants: Izindlela Zokuqamba Ezizayo...
Umbiko Wocwaningo Lwemakethe Yokucubungula Izinhlanzi 2022 - Umhlaba jikelele...
Amadolobha afinyeleleka kakhulu emhlabeni
'Ingqayizivele', indawo yemivubukulo eneminyaka engu-9,000 yembulwa...
I-Landscape Architect Evelele yaseCentral Park
I-Saber iqondise ukuthengiswa kwehhotela ngokutholwa okusha kwe...
I-Jamaica Tourism iyaqhubeka ngemuva kwe-COVID-19
Abafundi beHospitality and Tourism Bahlomula Kwabasha...
Ukufunda okuphambili kwa-IMEX eFrankfurt
I-airspace yaseRussia manje ivaliwe emazweni angama-36
I-SITE NITE Amanani entengo ezinyoni zase-Europe ayaphela maduze!
UKristin Smeltzer uthi:
Januwari 25, 2022 ngo-08: 17
Umyeni wami kwatholakala ukuthi unesifo sikaParkinson esisheshe saqala eneminyaka engu-67. Izimpawu zakhe kwakuwukunyakazisa izinyawo, ukukhuluma kabi, ukukhuluma ngezwi eliphansi, ukonakala kokubhala ngesandla, amakhono okushayela asabekayo, futhi ingalo yakhe yesokudla ibambe i-engeli engu-45 degree. Wafakwa ku-Sinemet izinyanga ezingu-7 kwase kwethulwa iSifrol ne-rotigotine eyathatha indawo ye-Sinemet kodwa kwadingeka ayeke ngenxa yemiphumela emibi. Sizame wonke amashothi atholakalayo kodwa lutho ukusebenza. Kube khona inqubekelaphambili encane uma ikhona ekutholeni ukwelashwa okuthembekile, ngiyekile imithi yami ngenxa yemiphumela engemihle. Umhlinzeki wethu wokunakekelwa usethule eKycuyu Health Clinic Parkinson yokwelashwa ngamakhambi. Impatho iyisimangaliso. Umyeni wami useluleme kakhulu! Vakashela i-kycuyuhealthclinic. co m
mary belinda uthi:
Januwari 22, 2022 ngo-17: 15
Umyeni wami kwatholakala ukuthi unesifo i-Parkinsons eminyakeni engu-2 edlule, eneminyaka engu-59. Wayenesimo sokugoba, ukundindizela, ingalo yangakwesokudla ayinyakazi futhi enomuzwa oshayayo emzimbeni wakhe. Wafakwa ku-Senemet izinyanga ezingu-8 kwase kwethulwa i-Siferol futhi yathatha indawo ye-Senemet, phakathi nalesi sikhathi kwatholakala ukuthi unesifo sokuwohloka komqondo. Waqala ukuba nemibono engemihle, walahlekelwa ukuxhumana naye. Ngisola ukuthi umuthi engamkhipha ku-Siferol (ngolwazi lukadokotela) wamsebenzisa nge-PD natural herbal formula esiwu-ode kwa-TREE OF LIFE HEALTH CLINIC, izimpawu zakhe zehla ngokuphelele over a 3 weeks use of the TREE OF LIFE HEALTH Parkinson's disease yemvelo. i-herbal formula. Manje cishe uneminyaka engama-61 futhi wenza kahle kakhulu, lesi sifo sesibuyiselwe ngokuphelele! (ww w. treeoflifeherbalclinic .com)